Iflethi okanye indlu ekwicomplex engasentla nje kweLake Lucerne - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex engasentla nje kweLake Lucerne
Iflethi ikwikhaya leholide kwindawo ethe cwaka enegadi enkulu ngentla kweLake Lucerne kumbindi weSwitzerland kwaye ikufutshane neSwissHolidayPark yolonwabo kunye ne-spa kwindawo yokutyibiliza kwikhephu kunye nokunyuka intaba.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex eqhelekileyo inamagumbi okuhlala, amagumbi okulala amabini, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye nebhalkhoni egqunyiweyo. Ikhaya leholide lifumaneka lula ngezithuthi zikawonke-wonke.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi ayi-3 enesitayile sakudala saseSwitzerland yenziwa ngamaplanga ibe ngenxa yoko ibonisa ubuhle basekhaya. Ikhitshi elisandul 'ukulungiswa negumbi lokuhlambela elitsha liyenza ibe kumgangatho wale mihla. Ukubonakala okukhethekileyo kwechibi kunye neentaba ukusuka kwiflethi kwenza ibe nomtsalane okhethekileyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Morschach